आइसीसी वरियतामा नेपाल, नेपाली क्रिकेटरहरु को कति वरियतामा ? | NepalDut
आइसीसी वरियतामा नेपाल, नेपाली क्रिकेटरहरु को कति वरियतामा ?
असाेज २५ गते २०७६
साढे तीन वर्षदेखि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा रहे पनि खेलाडीले आफ्नो खेल कौशल देखाउन छाडेका छैनन् ।
त्यसकै फलस्वरुपः खेलाडीहरु धमाधम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसीसीको वरियतामा पर्दै आएका छन् । पुरुषमात्र होइन महिला खेलाडीहरु पनि वरियतामा पर्दै आएका छन् ।
पुरुषतर्फ नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएको छ भने तत्काल टेष्ट मान्यता पाउने सम्भावना छैन ।
त्यसैले पनि एक दिवसीय र टेष्टमा नेपाली खेलाडीको वरियता छैन । टी–२० मा भने खेलाडीहरुले राम्रो वरियता पाएका छन् ।
टीमतर्फ – पुरुष– एक दिवसीयमा नेपाल १७ औं स्थानमा छ । टी–२० मा १३ औं स्थानमा रहेको छ । नेपाल टी–२० मा ११ औं वरियतामा रहेका अवस्थामा दुई स्थान झरेको हो ।
सिंगापुरमा भएको त्रिदेशीय सिरिज र ओमानमा भएको पाँचदेशीय सिरिजमा खराव खेल खेलेपछि नेपालको वरियता दुई स्थान खस्किएको हो ।
महिलातर्फ नेपालले एक दिवसीयमा वरियता नपाए पनि टी–२० मा १४ औं स्थान पाएको छ ।
खेलाडीतर्फ – खेलाडीतर्फ पुरुष र महिला दुवै खेलाडीहरु अटेका छन् । महिलाको तुलनामा पुरुष खेलाडीहरु बढी वरियतामा परेका छन् । महिलातर्फ खेल पनि कम हुने गरेको छ ।
पुरुषतर्फ– पुरुष खेलाडीहरुले टी–२० मा मान्यता पाएका छन् । नेपालको वरियतामा ब्याटिङतर्फ कप्तान पारस खड्का ४५ औं स्थानमा छन् । उनले हालैमात्र एउटा शतक पनि प्रहार गरेका थिए । पारस अलराउन्डतर्फ २४ औं स्थानमा रहेका छन् ।
बलिङतर्फ पाँच खेलाडी पर्न सफल भएका छन् । पहिलो पटक सन्दीप लामिछाने, करण केसी र अविनाश बोहरा वरियतामा परेका छन् । त्यसअघिदेखि सोमपाल कामी र बसन्त रेग्मी वरियतामा पर्दै आएका छन् ।
नयाँ वरियताको बलिङतर्फ सन्दीप ६४ औं स्थानमा छन् । त्यस्तै सोमपाल ६८ औं स्थानमा छन् । करण ८३ औं स्थानमा छन् । बसन्त ९० औं स्थानमा छन् । अविनाश १०० औं स्थानमा अट्न सफल भएका छन् । आइसीसीले एक सय जनाको वरियता निकाल्ने गर्छ ।
महिलातर्फ– महिलातर्फ अहिलेसम्म पूर्व कप्तान नेरी थापा तथा र सीता राना मगर पर्दै आएका छन् । अलराउन्डतर्फ सीता ५८ औं स्थानमा विराजमान छिन् । त्यस्तै नेरी बलिङतर्फ ९२ औं स्थानमा रहेका छन् ।